अधिक यातायातको लागि उत्तम एसईओ रणनीतिहरू के हो?
यहाँ थप प्रयोगयोग्य ट्राफिक र रूपान्तरित दरको लागि केहि प्रयोगयोग्य एसईओ रणनीतिहरू छन्. यी छवटा सजिलो चरणहरू तल आउँदै निश्चित जाँच गर्नुहोस्:
अध्ययन प्रयोगकर्ता डेटा
मुख्य इन्जिन अनुकूलनका लागि बिस्तृत टेक्नोलोजी अवधारणाको बारेमा बिर्सनुहोस्।. हो, एसईओ रणनीतिहरु को शेर को साझा को प्राथमिक लक्ष्य खोज इन्जिन रोबोट द्वारा बेहतर पहिचान प्राप्त गर्दै छ. एकै समयमा, खोज अप्टिमाइजेसन तपाईंको लक्षित दर्शकहरूको वास्तविक आवश्यकताहरु पूरा गर्ने बारेमा छ; मेरो मतलब भनेको मानिसहरु खोज्दै के हो भन्ने कुरा पत्ता लगाउँछन्, र तपाईंको सामग्री संग उनीहरूलाई दिईयो. त्यसोभए, तपाईलाई अझ राम्रो थाहा छ तपाईका श्रोताहरू, तपाईले प्रदान गर्ने अधिक गुणस्तर प्रयोगकर्ता अनुभव. र यो SERPs मा एक उच्च रैंकिंग को नेतृत्व गर्नु पर्छ. त्यससँग व्यवहार गर्ने सबै भन्दा सरल तरिका तपाईका आगन्तुकहरूलाई सिधा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, र म सम्बन्धित विषयवस्तुमा प्रायः प्रायः प्रश्नहरूको उत्तर दिँदै सुझाव दिन्छु, अन्य प्रयोगकर्ताहरूसँग उनीहरूको समाधान उपलब्ध गराउने. साथै, यो तपाईंको ब्लग पोष्टहरूको हेडरका लागि सिधा प्रयोग गर्नका लागि केहि कोर प्रश्नहरू प्रतिलिपि गर्न टाढाको राम्रो विचार हो।.
लैंडिंग पृष्ठहरुमा काम
प्राय: सामान्यतया, जब तपाईंको लिङ्कहरू SERPs को सूचीमा प्रदर्शित गरिन्छ , मानिसहरू वेबसाइट होमपेज वा तपाईंको सहायक ब्लगमा नेविगेट गरिएका छन्. तर यदि तपाई एक व्यावसायिक परियोजनासँग काम गर्दै हुनुहुन्छ भने, उदाहरणका लागि, अनलाइन भण्डार, तपाईंसँग राम्रो बिक्री वा थप अनुयायीहरू उत्पन्न गर्न एक अनोखी र राम्रो-अनुकूलित ल्यान्डिङ पृष्ठमा रहेको हुन सक्नुहुनेछ।. ल्यान्डिंग पृष्ठ सिर्जना गर्नाले एक विशेष विषय द्वारा संचालित समर्पित वेब पृष्ठ भएको छ. ल्यान्डिङ पृष्ठ एसईओ रणनीतिहरूको लागि, म यहाँ सिफारिस गर्दछु चरणमा सबै अनुकूलन कार्यहरू चरणमा. सबैभन्दा पहिला, तपाईंले ल्यान्डिंग पृष्ठ निर्माण गर्नु अघि, तपाईंलाई लामो लम्बाई कुञ्जी शब्द लगाउन आवश्यक पर्दछ. त्यस तरिका, यसको शीर्षक र मेटा विवरणमा काम गर्दछ. तपाईंको ल्यान्डिङ पृष्ठ कम्तिमा 2,000 शब्दहरूको निर्माण गरी राख्नुहोस्, किनभने Google को खोजी नतिजाहरुमा उच्च रैंकिंगको लागि एक मिठो स्थान हो।. पेशेवर वेब डिजाईन मा केहि निष्पक्ष रकम को निवेश मा दुश्मन न करें. अन्तिममा, तपाईंको ल्यान्डिंग पृष्ठको लागि प्रशंसापत्र प्राप्त गर्ने प्रयास गर्नुहोस् र सिंहासनमा रहन मजा लिनुहोस्.
तपाईंको सामग्री पुन: टेप गर्नुहोस्
सामग्रीको लागि राम्रो एसईओ रणनीतिहरू एक साधारण विचारमा आधारित हुन्छन् - सामग्री एक राजा हो।. हो, म यहाँ गम्भीर छ, किनकि यो व्यावहारिक प्रयोगकर्ता अनुभवको साथ उत्तम गुणस्तर लेखन प्राप्त गर्न तपाईंको सामाग्रीमा कडा मेहनत गर्न एक उचित विचार हो।. यद्यपि, यो पर्याप्त र समय-समयको श्रम हुन सक्छ. त्यसो गर्नुको सट्टा, म तपाइँका पाठ लेखनका लागि केहि स्मार्ट एसईओ रणनीतिहरूको लागि आवेदन गर्ने सुझाव दिन्छु. केवल एक फरक सामग्री प्रयोग गरी विभिन्न ढाँचाहरूमा प्रयोग गर्नुहोस्, उदाहरणको लागि, अधिक कुशल र सजिलो प्रयोगका लागि प्रदर्शन गर्न. मेरा मतलब तपाईं सजिलै संग तपाईंको ब्लग पोस्टहरु (कम से कम आंशिक रूप देखि) बहुमूल्य भिडियो ट्यूटोरियल, रोमांचक प्रस्तुतीकरण, ठीक पोडकास्ट, र infographics, या पीडीएफ प्रारूप मा केहि सहायक सामाग्री मा पुनर्निर्माण गर्न सक्छन्. अधिकतम प्रभावको लागि, अधिक डेटा र ट्राफिक प्राप्त गर्न उपयोगी डेटा साझेदारी-अनुकूलको टुक्रा बनाउनुहोस्. तपाईं उस समय समय व्यतीत गर्नुहुन्न Source .